POORI BHAJI နည်း - POORI နှင့် ALOO SABZI လုပ်နည်း - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ချက်ပြုတ်နည်းများ
Poori Bhaji စာရွက် - Poori နှင့် Aloo Sabzi လုပ်နည်း
အားကစား နယူးဇီလန်ခရစ်ကတ်ဆုများ - ဝီလျံဆင်သည်ဆာရစ်ချတ်ဟယ်ဒလီတံဆိပ်ကိုစတုတ္ထအကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
နေအိမ် ချက်ပြုတ်နည်းများ oi-Sowmya Subramanian မှချက်ပြုတ်နည်းများတင်ခဲ့သည်။ Sowmya Subramanian | သြဂုတ်လ 28, 2017 တွင်
Poori bhaji သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်ပြင်ဆင်သောရေပန်းစားသောနံနက်စာသို့မဟုတ်ညစာစာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အကြိုက်ဆုံးအဓိကအစားအစာဖြစ်သည်။ Poori နှင့်အာလူးဟင်းများကိုပွဲတော်များအတွင်းကြက်သွန်နီနှင့်ကြက်သွန်ဖြူများမသုံးပဲပြင်ဆင်ထားသည်။
Poori နှင့် aloo sabzi တို့သည်အိမ်ထောင်စုအများစုတွင်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်စာစားသုံးမှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ နူးညံ့။ အရသာရှိသော aloo masala ပါသော crunchy and hot pooris သည်လူများကိုပိုမိုလိုချင်တောင့်တစေသည်။
Poori Bhaji သည်ရိုးရှင်းသော်လည်းအရသာရှိသောစာရွက်ဖြစ်ပြီးပါတီများနှင့်မိသားစုလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လူအနည်းငယ်၏လက်ရာသည်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီလက်ချောင်းကိုအိမ်မှာစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးပုံများဖြင့်အဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်ဖတ်ပြပါ။
Poori BHAJI ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
poori BHAJI ချက်ခြင်း | PORI နှင့် ALAB SABZI လုပ်နည်း | Poori နှင့် Potato CURRY RECIPE Poori Bhaji နည်းနည်း Poori နှင့် Aloo Sabzi လုပ်နည်း | Poori နှင့်အာလူးဟင်းစာမေးပွဲအချိန် ၁၅ မိနစ်ချက်ပြုတ်ချိန် ၄၀ မီတာစုစုပေါင်း ၅၅ မိနစ်
Meena Bhandari မှပြင်ဆင်နည်း
Atta - 1 ခွက်
ဆား - 1 Tsp
သကြား - 1 Tsp
ဆီ - ကြော်ရန်အတွက်2tbsp +
ရေ - cupth ခွက်ဖလား
ရေနံ - 1 tbsp
ဟင်း (asafoetida) - အဖြစ်တော့
နနွင်းမှုန့် - p Tsp
Dhaniya အမှုန့် -2Tsp
အနီရောင်ငရုတ်သီးမှုန့် - 1½ Tsp
ရေ - ½ခွက်ဖလား
အာလူး (ပြုတ်နှင့် Cube သို့ဖြတ်) - 3
အစိမ်းရောင်ငရုတ်သီး (ကုန်တယ်) - 1 Tsp
Amchur အမှုန့် - 1 Tsp
နံနံအရွက် (ခုတ်) - 1 tbsp
သံပုရာဖျော်ရည် - ½တစ်သံပုရာ
Jeera အမှုန့် - 1 Tsp
2. hing နှင့် Jeera ထည့်ပါ။
၅။ နောက်ထပ် dhaniya အမှုန့်နှင့်အနီရောင်ငရုတ်သီးမှုန့်တို့ကိုထည့်ပါ။
၉။ အစိမ်းရောင်အအေးများနှင့် amchur အမှုန့်များကိုကောင်းစွာရောနှောပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သံပုရာဖျော်ရည်နှင့် Jeera အမှုန့်ကိုထည့်ပါ။
13. Poori တွေအတွက် atta ကိုရောစပ်ထားတဲ့အိုးထဲထည့်ပါ။
၂၁။ Poori ကိုဆီထဲသို့ထည့်ပြီးကြော်ပါ။
22. ထို့နောက်ရွှေအညိုရောင်ဖြစ်လာသည်သည်အထိ, ကကျော်လှန်နှင့်အခြားဘက်မှာကြော်။
၁။ မုန့်စိမ်းသည်အလွန်နူးညံ့။ စေးကပ်လျှင်၎င်းသည်ဆီပိုမိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမို atta ထပ်ထည့်ပြီးခက်ခဲသောမုန့်စိမ်းကိုပုတ်ပါ။
3. အကယ်၍ သင်သည်ဤပန်းကန်ကို Vrat အတွက်ပြင်ဆင်နေပါကကျောက်ဆားသို့မဟုတ် sendha namak ကိုသုံးပါ။
အမှုဆောင်အရွယ်အစား - 1 ပန်းကန်
ကယ်လိုရီ - 350 ကယ်လိုရီ
အဆီ - 25,9 ဂရမ်
ပရိုတိန်း - ၇.၁ ဂရမ်
သကြား - 1.2 ဂရမ်
အမျှင် - 4.2 ဂရမ်
တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် - Poori Bhaji လုပ်နည်း
5. နောက်ထပ် dhaniya အမှုန့်နှင့်အနီရောင်ငရုတ်သီးမှုန့်ကိုထည့်ပါ။
mahendra singh dhoni နှင့် sakshi အချစ်ဇာတ်လမ်း
mahabharat အတွက် draupadi ၏အရေအရောင်
အသားအရေအတွက် fenugreek အစေ့များရေကိုသောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ